प्रधानमन्त्रीले सोधे–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ? | Online Saptari
प्रधानमन्त्रीले सोधे–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?
Home / प्रधानमन्त्रीले सोधे–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?
१९ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकारको भविष्य र आसन्न निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्तालगायत कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा आउन सक्ने समस्या र निर्वाचनको भविष्यमा केन्द्रित भएर कानुनविद्सँग परामर्श गरेका हुन् । देउवाले परामर्शका लागि बुधबार एकदर्जन कानुनविद्लाई बालुवाटार डाकेका थिए । कानुनविद्हरू पनि संविधान नै बोकेर देउवालाई भेट्न बालुवाटार
पुगेका थिए ।
छलफलमा उपस्थित कांग्रेस नेताहरूले निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिअनुरुप वामगठबन्धन भएको हुनसक्ने आशंकासमेत उब्जाएका थिए ।महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर छलफल भएको बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।